Cirrhosis (အသည်းခြောက်ခြင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Cirrhosis (အသည်းခြောက်ခြင်း)
Cirrhosis (အသည်းခြောက်ခြင်း) ကဘာလဲ။
အသည်းခြောက်ခြင်းဆိုသည်မှာ အသည်းပျက်စီးပြီး လုပ်ငန်းကောင်းစွာ မလုပ်နိုင်သော အခြေအနေတစ်ခု ဖြစ် ပါသည်။ ရောင်ရမ်းခြင်းသည် အသည်းတစ်ရှူးများအား အမာရွတ်ဖြစ်စေပြီး အသည်းတွင်း သွေးစီးဆင်းခြင်းကို တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့် ပိတ်ဆို့စေပါသည်။
အသည်းသည် ခန္ဓါကိုယ်တွင် အကြီးဆုံး အတွင်းပိုင်း အင်္ဂါဖြစ်ပါသည်။ အသည်းသည် အရေးကြီးသော ခန္ဓါ ကိုယ် လုပ်ငန်းများစွာကို တာဝန်ယူပြုလုပ်ပေးပါသည်။ အဓိက လုပ်ငန်းများမှာ-
အစာချေဖျက်စဉ်တွင် အစာမှ လိုအပ်သော အာ ဟာရများကို စုပ်ယူ၍ သိမ်းဆည်းပေးပါသည်။ ထို့ နောက် ထိုအာဟာရများကို ကျန်သော ခန္ဓါကိုယ် အစိတ်အပိုင်းများသို့ ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။ ထိုအာ ဟာရများတွင် ပရိုတိန်း၊ သကြား နှင့် အဆီတို့ ပါဝင်ပါသည်။
ပရိုတိန်းအသစ်များထုတ်လုပ်ပြီး သွေးခဲစေသော ပစ္စည်းများနှင့် ကိုယ်ခံအားပစ္စည်းများကို ပြုလုပ် ပေးပါသည်။ ပျက်စီးသွားသော တစ်ရှူးများကို ခန္ဓါကိုယ်မှ ပြုပြင်ရာတွင် ကူညီပေးပါသည်။
အစာချေဖျက်စဉ်တွင် အစာတွင်းမှ အဆီများကို ဖြိုခွဲပြီး သည်းခြေရည်များပြုလုပ်ပါသည်။ ခန္ဓါ ကိုယ် မှ အဆီများ၊ ကိုလက်စထရော နှင့် အဆီ တွင်ပျော်ဝင်သော ဗီတာမင်များ စုပ်ယူရန် ကူညီပေးပါသည်။
အဆိပ်အတောက်၊ ပိုလျှံသော အဆီများနှင့်ကို လက်စထရော စသော အညစ်အကြေးများကို သွေးအတွင်းမှ စစ်ထုတ်ပေးပါသည်။ ထိုအညစ် အကြေးများကို ဝမ်းအဖြစ်ပြောင်းပြီး ခန္ဓါကိုယ် မှ ဖယ်ရှားပစ်ပါသည်။
များသောအားဖြင့် အသည်းသည် ပျက်စီးသော တစ်ရှူးများကို ပြန်လည်ကောင်းမွန်အောင် ပြုပြင်နိုင်ပါ သည်။ သို့သော် ပျက်စီးမှုသည် ပြင်းထန်ပြီး အချိန်အတန် ကြာလာပါက အသည်းတစ်ရှူးများသည် အမာရွတ်တစ်ရှူး များအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပါသည်။ အမျှင်ခဲ ဖြစ်ပေါ်ခြင်းဟု ခေါ်ပါသည်။
အသည်းအမာရွတ်ဖြစ်ခြင်းသည် တဖြည်း ဖြည်းနှင့် စုပုံလာပြီး အသည်းခြောက်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်လာပါ သည်။ အသည်းခြောက်ခြင်း၏ အစောပိုင်း အဆင့်များတွင် အသည်းသည် ပုံမှန်လုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်နိုင်သော် လည်း နောက်ပိုင်းအဆင့်များတွင် အသည်းပျက်စီးပါသည်။ အသည်းပျက်စီးခြင်းကို ကာကွယ်ရန် ကုသမှုအမြန် ခံယူရန် အရေးကြီးပါသည်။
Cirrhosis (အသည်းခြောက်ခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
အသည်းခြောက်ခြင်းသည် အဖြစ်များပြီး နာတာရှည် အသည်းရောဂါ၏ နောက်ဆုံးအဆင့် ဖြစ်ပါသည်။ ကမ္ဘာ တစ်ဝန်း သန်း ၅၀ သောသူများသည် နာတာရှည် အသည်း ရောဂါ ခံစားနေရသည်ဟု ခန့်မှန်းထားပါသည်။
အသည်း ခြောက်ခြင်းသည် အမျိုးသားများ ရော အမျိုးသမီးများပါ ဖြစ်ပွားသော်လည်း မကြာသေးမီက လေ့လာမှုများအရ အသည်းခြောက်ခြင်းကြောင့် သေဆုံးခြင်းသည် အမျိုးသား များတွင် ပိုဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
Cirrhosis (အသည်းခြောက်ခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
အသည်းခြောက်ခြင်း၏ ရောဂါလက္ခဏာများသည် ဖျား နာသော အဆင့်ပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ အသည်းခြောက် ခြင်း၏ အစောပိုင်းအဆင့် ရှိသောလူများသည် ရောဂါ လက္ခဏာ များမပြသပါ။
အောက်ပါ ရောဂါ လက္ခဏာများ တွေ့ကြုံ ခံစားရနိုင်ပါသည်။
အစာစားချင်စိတ်နည်းခြင်း သို့မဟုတ် မရှိခြင်း
အသည်းခြောက်ခြင်း၏ နောက်ပိုင်းအဆင့်များတွင် အောက်ပါ လက္ခဏာများ ရှိနိုင်ပါသည်။
အညိုရောင် သို့မဟုတ် အဝါရင့်ရောင် ဆီးသွားခြင်း
အရေပြားနှင့် ချက်ပတ်လည်တွင် သွေးကြောများ ပြောင်းလဲခြင်း
အရည်များစုပြုံခြင်းကြောင့် ဝမ်းဗိုက်ဖူးယောင်ခြင်း ၊ ခြေထောက်များ ဖူးရောင်ခြင်း။
အထက်တွင် ဖော်ပြထားသော ရောဂါလက္ခဏာများ ရှိပါက ဆရာဝန်နှင့် သွားရောက်ပြသပါ။ နောက်ထပ် အသည်းပျက်စီးမှုများမှ ကာကွယ်ရန် အသည်းခြောက်ခြင်း ကိုစောစီးစွာ ကုသရန် အရေးကြီးပါသည်။ အသည်းခြောက် ခြင်းကို စောစီးစွာ သိရှိပါက အသည်းဆဲလ်များကို ပြန်ပြင် ပြီး အသည်းပျက်စီးခြင်းကို ပြန်လည် ကယ်ဆယ်နိုင်ပါ သည်။
Cirrhosis (အသည်းခြောက်ခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
အသည်းခြောက်ခြင်းကို ဖြစ်စေသော အချက်များစွာ ရှိပါသည်။ တွေ့ရများသော ဖြစ်စေသည့်အကြောင်းရင်း များမှာ-
နာတာရှည်အသည်းရောင်ရောဂါ C ။ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှုကြောင့်ဖြစ်သော အသည်းရောင်သော နာတာရှည်ရောဂါတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သွေးသွင်း ခြင်း သို့မဟုတ် ဆေးထိုးအပ် မျှဝေသုံးစွဲခြင်း မှ ရောဂါပိုးရှိသောသွေးများ ပျံ့နှံ့ပြီး ကူးစက်ပါသည်။ အသည်းရောင်ရောဂါ C သည် လိင်ဆက်ဆံခြင်း သို့မဟုတ် ကလေးမွေးခြင်းမှလည်းကူးစက်နိုင်ပါ သည်။ သို့သော် ရှားပါးပါသည်။
အရက်ကြောင့်ဖြစ်သော အသည်းရောဂါ ။ ဤရော ဂါသည် အရက်အလွန်သောက်သောကြောင့် ဖြစ် သည်။ တစ်နေ့ကို ၂-၃ ခါကျော်ဖြင့် ၁၀-၁၂ နှစ် လောက်အထိသောက်ပါက အရက်ကြောင့်ဖြစ် သော အသည်းခြောက်ခြင်း ဖြစ်ပွားပါသည်။
အရက်ကြောင့်မဟုတ်သော အသည်းအဆီဖုံးခြင်း။ non-alcoholic steatohepatits (NASH) ဟု လည်းခေါ်ပြီး အသည်းတွင် အဆီများ ပိုလျှံလာ သောအခါ ဖြစ်ပွားပါသည်။ အဝလွန်ခြင်း၊ မထိန်း ချုပ်နိုင်သော ဆီးချိုသွေးချို၊ သွေးပေါင်တက်ခြင်း၊ ကိုလာစထရောဓါတ်နှင့် triglycerides များခြင်း ကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
နာတာရှည်အသည်းရောင်ရောဂါ B။ အသည်း ရောင်ရောဂါ C နှင့်အလားတူစွာ အသည်းရောင် ရောဂါ B သည်လည်း ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခြင်း ကြောင့် ဖြစ်ပွားပြီး အသည်းရောင်ခြင်း အမျှင်ခဲ ဖြစ်ခြင်း နှင့် အသည်းခြောက်ခြင်း ကို ဖြစ်စေ ပါသည်။
အသည်းရောင်ရောဂါ B သည် ဆေးထိုး အပ်မျှဝေသုံးစွဲခြင်း၊ သွေးသွင်းခြင်း၊ လိင်ဆက်ဆံ ခြင်း နှင့် ကလေးမွေးဖွားခြင်း တို့မှ ရောဂါပိုး ရှိသော သွေးထိမိပြီး ကူးစက်နိုင်ပါသည်။ အသည်း ရောင်ရောဂါ B သည်ကာကွယ်နိုင်သော ရောဂါ တစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ ကာကွယ်ဆေးရှိပါသည်။
အခြားတွေ့ရနည်းသော အကြောင်းရင်းများမှာ– ကိုယ် ခံအား ပြန်လည်တိုက်ခိုက်သော အသည်းရောင်ရောဂါ ( ခန္ဓါကိုယ်မှ အသည်းဆဲလ်များကို တိုက်ခိုက်ခြင်း)၊ သည်း ခြေရည်ပြွန် ပျက်စီးခြင်း နှင့် ပိတ်ဆို့ခြင်း၊ မျိုးရိုးဆက်ခံ သော အသည်းရောဂါများ ( Wilson’s Disease, Hemochromatosis) နှင့် အခြားရှားပါးသော အသည်း ရောဂါပိုးကူးစက်မှုများ (အသည်းရောင်ရောဂါ D) တို့ဖြစ် ပါသည်။
Cirrhosis (အသည်းခြောက်ခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
အသည်းခြောက်ခြင်းဖြစ်နိုင်ချေကို မြင့်စေသော အချက် များစွာရှိပါသည်။ အောက်ပါတို့ ပါဝင်ပါသည်။
အချိန်ကြာရှည်စွာ အရက်အလွန်အကျွံသောက် ခြင်း။ နေ့စဉ် အရက် ၂-၄ခွက်ကျော် ကို ၁၀ နှစ် ကျော်သောက်ခြင်းကို ဆိုလိုပါသည်။
အကာအကွယ် မပါဘဲ လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည် အသည်းရောင်ရောဂါ B နှင့် C ကူးစက်နိုင်ချေကို မြင့်တက်စေပါသည်။
ဆေးထိုးအပ် မျှဝေသုံးစွဲခြင်း သို့မဟုတ် သွေးသွင်း ခြင်းသည်လည်း အသည်းရောင်ရောဂါ B နှင့် C ကူးစက်နိုင်ချေကို မြင့်တက်စေပါသည်။
မျိုးရိုးဆင်းသက်မှုကြောင့်ဖြစ်သော အသည်း ရောဂါများ (Wilson’s disease or hemochromatosis ) သည်လည်း အသည်း ခြောက်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ချေကို မြင့်တက်စေပါသည်။
ကိုယ်အလေးချိန်များခြင်း သို့မဟုတ် အဝလွန်ခြင်း သည် အသည်းအဆီဖုံးခြင်းကို ဖြစ်စေပြီး အသည်း ရောင်ခြင်းနှင့် အသည်းခြောက်ခြင်းကို ဖြစ်စေပါ သည်။
ရောဂါ အန္တရာယ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်သော နည်းလမ်းများကို ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။ အန္တရာယ်ကို သင့်တော်စွာ ထိန်းချုပ်ခြင်းဖြင့် အသည်းခြောက်ခြင်းကို ကာကွယ်နိုင် ပါသည်။ ပိုဆိုးမလာနိုင်ရန်လည်း ကာကွယ်နိုင်ပါသည်။
Cirrhosis (အသည်းခြောက်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ဆရာဝန်သည် လက်ရှိကျန်းမာရေး အခြေအနေကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း နှင့် ဆေးစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း ဖြင့် အသည်းခြောက်ခြင်းကို အတည်ပြုနိုင်ပါသည်။ ရောဂါ အတည်ပြုခြင်း စစ်ဆေးမှုများတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်ပါ သည်။
မိသားစုဆေးမှတ်တမ်း။ မိသားစုထဲတွင် အသည်း ရောဂါရှိကြောင်းသိရှိခြင်းသည် ဆရာဝန်က ရောဂါအဖြေရှာရာတွင် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
ခန္ဓါကိုယ်စစ်ဆေးခြင်း။ ဆရာဝန်သည် သင်၏ ဝမ်းဗိုက်အပါအဝင် သင့်ခန္ဓါကိုယ်အား စစ်ဆေး ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အသည်းကြီးနေသလားနှင့် မာသောနေရာများရှိသလား စမ်းသပ်စစ်ဆေးရန် အရေးကြီးပါသည်။
သွေးစစ်ခြင်း။ သွေးစစ်ခြင်းသည် အသည်း အင်ဇိုင်းများ၊ သွေးဆဲလ်များနှင့် platelets များ၏ ပုံမှန်မဟုတ်သော ပမာဏ များကိုပြသနိုင်ပါသည်။ အသည်းပျက်စီးမှု ကိုတိုင်းတာနိုင်သော စစ်ဆေးမှု ၃မျိုးရှိပါသည်။ Bilirubin test ( သွေးသွင်း သည်းခြေရည်ကိုတိုင်းခြင်း)၊ Creatinine test ( ကျောက်ကပ်လုပ်ငန်း တိုင်းတာခြင်း) နှင့် international normalized ratio test ( သွေးခဲ စေသော စွမ်းရည်ကိုတိုင်းခြင်း) တို့ဖြစ်ပါသည်။
ပုံရိပ်ဖော်သောစစ်ဆေးမှုများ။ ဤစစ်ဆေးမှုများ သည် ရေဖျဉ်းစွဲခြင်း ( အရည်များထိန်းသိမ်းထား ခြင်းကြောင့် ဝမ်းဗိုက်ဖောင်းလာခြင်း) နှင့် အသည်း ကင်ဆာစသော အသည်းပျက်စီးခြင်း၏ ဆိုးကျိုးများကို ဖော်ထုတ်သိရှိနိုင်ပါသည်။
အသည်းတစ်ရှူးစယူခြင်း။ အသည်းတစ်ရှူးစကို ယူ၍ အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းဖြင့် ကြည့်ရှုစစ်ဆေး ခြင်းဖြင့် အသည်းပျက်စီးမှုကို သက်မှတ်ခြင်းဖြစ် သည်။
Cirrhosis (အသည်းခြောက်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
အသည်းခြောက်ခြင်း၏ကုသမှုသည် ဖြစ်စေသော အ ကြောင်းရင်းနှင့် ရရှိလာသော ဆိုးကျိုးများအပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ အသည်းခြောက်ခြင်းဖြစ်စေသော အကြောင်းရင်းကို အရင်ကုသရပါမည်။ အရက်သောက် ခြင်းကိုလျော့ချခြင်း နှင့် အသည်းခြောက်ခြင်းကိုဖြစ်စေ သော ဆေးများသောက်ခြင်းကို လျော့ချရပါမည်။
အသည်းရောင်ရောဂါ B နှင့် C ကို ဗိုင်းရပ်စ်သေစေ သောဆေးများဖြင့်ကုသ၍ အသည်းရောင်ခြင်းကို ထိန်း ချုပ်နိုင်ပါသည်။ အသည်းခြောက်ခြင်းကိုလည်း လျော့ချ ပေးပါသည်။ သည်းခြေရည်ပြွန်ပိတ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါက ဆရာဝန်သည် ursodiol ဟုခေါ်သော ဆေးပေးပါလိမ့်မည်။ အသည်းမှ ထုတ်လုပ်သော သည်းခြေအက်စစ်များကို အစားထိုးပေးရန် ဖြစ်ပါသည်။
အသည်းခြောက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သော ဆိုးကျိုးများကို ကုသရန်လည်း လိုအပ်ပါသည်။ ဆိုးကျိုးများတွင် ဝမ်းဗိုက် အောင့်ခြင်း ယားယံခြင်း၊ အစာအိမ်တွင် အရည်များ စုခြင်း (ရေဖျဉ်းစွဲခြင်း)၊ ဝမ်းဗိုက်ရှိ portal သွေးပြန်ကြောတွင် သွေးပေါင်တက်ခြင်း၊ သွေးကြောများကျယ်ခြင်း၊ အသည်း ကင်ဆာ၊ အရိုးပွခြင်း၊ သည်းခြေကျောက်တည်ခြင်း နှင့် အဆိပ်အတောက်များ စုပြုံ၍ ဦးနှောက် လုပ်ငန်းကျဆင်း ခြင်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။
အခြားကုသမှုများမှာ ခွဲစိတ်ကုသခြင်း၊ သွေးကြောများ ကိုသွေဖယ်ခြင်း နှင့် အသည်းအစားထိုးခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။
လူနေမှုပုံစံ ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများ အသုံးပြုခြင်း သည် အသည်းခြောက်ခြင်း ကို ကုသရာတွင် ဘယ်လို အထောက် အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ပါ လူနေမှုပုံစံများ နှင့် အိမ်သုံး ကုထုံးများ သည် အသည်းခြောက်ခြင်း ကို ထိန်းချုပ်နိုင် ပါသည်။
ကောင်းမွန်မျှတသော အစားအစာကိုစားပါ။ အသည်းသည် ပရိုတိန်းကို အသုံးမပြုနိုင်သော ကြောင့် ပရိုတိန်းစားခြင်းကို ကန့်သတ်ရန် လိုပါ သည်။
ရောဂါလက္ခဏာများအပေါ်မူတည်၍ လှုပ်ရှားမှု များကို အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲပါ။
ကုသမှုခံယူနေစဉ် သွေးအန်ခြင်း၊ ဝမ်းမည်းများ သွားခြင်း၊ ဝမ်းတွင် အနီရောင်တောက်တောက် သွေးများပါခြင်း၊ ခြေထောက်နှင့် ဝမ်းဗိုက်တွင် အရည်များ စုပြုံခြင်း နှင့် အဖျားတက်ခြင်းတို့ ဖြစ် ပါက ဆရာဝန်အား ခေါ်ပါ။
Cirrhosis. http://www.niddk.nih.gov/health-information/health-topics/liver-disease/cirrhosis/Pages/facts.aspx. Accessed May 30,2016.
http://www.msdmanuals.com/professional/hepatic-and-biliary- disorders/fibrosis-and- cirrhosis/cirrhosis.
http://www.worldgastroenterology.org/publications/e-wgn/e-wgn- expert-point- of-view- articles-collection/global-burden- of-liver- disease-a- true-burden-on- health-sciences- and-economies. Accessed May 30, 2016.Cirrhosis. http://www.niddk.nih.gov/health-information/health-topics/liver-disease/cirrhosis/Pages/facts.aspx. Accessed May 30,2016.
http://www.worldgastroenterology.org/publications/e-wgn/e-wgn- expert-point- of-view- articles-collection/global-burden- of-liver- disease-a- true-burden-on- health-sciences- and-economies. Accessed May 30, 2016.